हो साँच्चै सपना अझै अधुरै छ ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
हो साँच्चै सपना अझै अधुरै छ !
आख्यानकार हरि कटुवाल द्वारा लिखित उपन्यास ‘अधुरो सपना’ पढेपछि पुस्तकबारे चर्चा नगर्न सकिँन । उपन्यासकार कटुवालको पहिलो उपन्यास ‘अधुरो सपना’ पुस्तकबाट समाजलाई दिन खोजिएको विषय र उपन्यासको मर्म निकै सान्दर्भिक छन् ।
उपन्यासका पानाहरू पढ्दै जाँदा यस्तो लाग्छ कतै हामी नेपाली पनि पात्र विवेकको जस्तै हालतमा छैनौँ ?एक फेर सोच्न बाध्य गराएको छ । सरकारी जागिरे व्यक्तिलाई प्रभाव,बाध्यता,दबाव,जस्ता बिषयहरुमा कसरी फस्ने–फसाईने गरिन्छ ? उपन्यासमा ग्रामिण परिवेश देखी शहरी परिवेश सम्म एउटै पात्र(विवेक)लाई उभ्याइएको छ ।
परिस्थिती अनुसार जीवनशैली फरक भएको हुन्छ ।राष्ट्रवादले ओतप्रोत भएका विवेकका पिता रमेशले देखको सपना वास्तवमा अझै अधुरै छ । २०४६ देखी हालसम्मका परिवेशमा जनताले गरेको अपेक्षा पहुँचवालाले मात्रै कसरी प्रयोग गर्ने गर्छन भन्ने कुरा उपन्यासबाट स्पष्ट हुन्छ ।
उनले देखेको समृद्ध,स्वाभिमानी ,समानता,र न्यायका कुरा गफ गर्ने मेलो मात्रै बन्दै आएको छ भन्ने कुरा देशको हालैको परिवेशसँग उपन्यासका पात्र विवेकले देखाएका छन् । ज्याला मजदुरी गरी परिवार पाल्ने जुठे साँइलो जस्ताको दर्दनाक व्यथाका ग्रामिण परिवेशको वास्तविकता पनि छर्लङ्ग छ । विवेकले गरेको एउटै निर्णयले उसको सपना अधुरो बनाएको हो कि उसलाई समयसँग ज्युनु छ । परिवारको समस्यामा भोकोपेटले राष्ट्रवाद भन्दैन भन्ने कुरालाई विवेकले प्रमाणीत गरेको छ ।
एक्ली विधवा नारीको जीवनमा समाजले हेर्ने दृष्किोणबाट सङ्घर्षमा आमाको रुपमा (शान्ति)पात्र लाई उभ्याइएको छ ।उनी जस्ता एक्ली विधुवा नारीलाई समाजले भिराउने अनेकौँ बिल्लाहरु जागिर खान गएको ठाउँमा हाकिमको व्यवहार अर्की महिलालाई लगाइएको बोक्सी आरोप जस्ता समाजका सङ्कीर्ण सोचलाई प्रष्ट देखाएको छ ।
०४६को जन–आन्दोलनमा रमेशको मृत्युको सन्दर्भ अघिबाटै देशले खोजेको गति र शान्तिलाई रमेशले देखाएको बाटो हुँदै शान्तिले पनि आफ्नो छोरालाई मार्ग त देखाउँछे तर उसले भोग्नु परेको अनेकौँ पीडाले गर्दा उ पनि विवश हुन्छ आफुलाई देखाएको बाटो हिँड्न उसले आफ्नो रोजीरोटीको लागी रोजीएको केहि गलत पाटाहरु प्रती उ आफु भन्दा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि उपन्यासबाट देखिन जान्छ ।
एउटा निम्न बर्गीय परिवारको एउटा सरकारी कर्मचारीलाई भिराएको स्वाभिमानको पाटोभित्र अडिन कति कठिन छ भन्ने कुरा उपन्यासले देखाउँछ । गफ र वास्तविकता कति अलग पाटा हुन ? राष्ट्रवादका गफ गरेर जनताको नाममा हरेक ठाउँ ठाउँमा लुटि रहेका नेपालीलाइ उपन्यासले चित्रण गर्न भ्याएको छ । विवेकको श्रीमती आस्मालाई सुत्केरी हुदा एयरपार्टमा सभासदले देखाएको व्यवहार र छोरालाई उपचार गर्नको लागी भेन्टिलेटरको लागी समेत राजनीति पावर, नातावाद, कृपावादको दलदलमा निरङ्कुशता हावी हुने कुरा उपन्यासले उठान गरेको छ ।
एउटा सानो सरुवाको लागी मागिएको पैसा,कार्की काकाले गरेको उपकारको मुल्यको बदला जस्ता बिषयहरु समाजका यथार्थ परक छन् । किताब पढ्दै गर्दा उपन्यासको पात्र कतै मै हुँ की भन्ने आभाष दिलाएको छ ।युवा बर्गको लागी निकै पठनीय पुस्तकको रुपमा मैले यसलाई लिएको छु हरेक शब्द शब्दमा झस्काउँछ राष्ट्रको पक्षमा हरेक क्षेत्रलाई तार्कीक गर्न भ्याएको छ उपन्यासले देशले मुहार फर्ने नाममा भोगी रहेको वास्तविकतालाई उठान गरिएको छ ।
निकै सान्दर्भीक उपन्यासको रुपमा मैले अधुरो सपनालाई लिएँ । अब सबै नेपालीहरुले एक चोटी छातीमा हात राखेर प्रण गर्ने समय आईसकेको आभाष उपन्यास पढेपछि महसुस हुन्छ । गम्भीर विषयहरूलाई उठान गर्नुभएको छ । कतै उपन्यासले भने जस्तै विवेक को जीवन जस्तै एकाएक परिवर्तन भई देशले पनि आत्महत्या समेत गर्नुपर्ने दिनको सामना गर्नु नपर्ला भन्ने आधार देश र विवेकको परिवार दाँज्दा महसुस गर्न पाईन्छ ।
पात्रहरु सबैले यथार्थतालाई चित्रण गरेका छन् । उपन्यासकार कटुवाल आख्यानकारितामा निकै संभावना भएका उपन्यास पढेपछि जान्न सकिन्छ । उपन्यासले उठाएको मुख्य बिषय हाम्रा सपनाहरु अझै अपुरै छन् हो अझै वास्तविक सपनाहरु अधुरै छन् ।
पुस्तक चर्चा : शुकदेव थपलिया
1614 पटक पढिएको